Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2012
"Tatitra Teknika" tamin'ny fihaonambe GVO
2012-07-14 @ 08:37 in Ankapobeny
Efa mihoatra ny folo andro sahady izay ny fihaonambe fanaon'ny Global Voices Online isaky ny roa taona. Maro ny zavatra azo raisina sy tantaraina saingy lasa aretina mpahazo ahy mihitsy ny fahakamoana hitatitra araka ny tokony ho izy. Ankoatra ny fitantarana maha-bilaogera manavanana ahy kokoa satria malalaka ny fomba fanehoana azy dia misy koa ny karazana tatitra teknika kely tahaka ny an'ny mpanao gazety. Izany angaha aloha no avoaka etoana mandra-paha...
Nisy fihaonambe nokarakarain'ny fikambanana Global Voices Online fanaony isaky ny roa taona notontosaina tao an-drenivohitra Kenyana, Nairobi tamin'ny 28 jona ka hatramin'ny 3 jolay lasa teo. Nihaona tamin'izany ireo bilaogera, mpanao gazety, mpianatra mpanao fikarohana, manampahaizana momba ny teknolojian'ny aterineto ary ny solontenan'ny orinasan-tserasera goavana tahaka ny Google. Nanana solontena roa tamin'izany isika Malagasy, izay samy bilaogera avokoa.
Mizara roa ny fihaonana ka ny andiany voalohany (28 jona - 1 jolay) no nanaovana ny fivoriambe anatin'io fikambanana miorina an-tserasera io. Marihina fa fikambanana iraisampirenena manana ny foiben-toerany ao Amsterdam, Hollande ny Global Voices Online ary sehatra miezaka ny manasongadina ny vaovao tsy fantatry ny fampahalalam-baovao goavana tandrefana loatra. Vitsy kokoa noho izany ny vaovao avy any Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana no hita ao fa vaovao avy aty Afrika, Amerika Latina, Azia, Oseania, Eoropa Afovoany sy Atsinanana no ezahina asongadina. Mampiavaka ny tranonkalan-dry zareo ihany koa ny fandikana ny lahatsoratra na vaovao avy amin'ny fiteny anglisy ho amin'ny fiteny 30 ka anisan'izany sady mavitrika ny fiteny malagasy. Nifampiresahana tamin'izany ny ho avin'ny fikambanana, ny fanatsarana ny zavatra ataony tahaka ny fiarovana na fisoloana vava ireo bilaogera na mpanao gazety tampenam-bava na migadra ohatra. Eo ihany koa ny fanampiana ireo vondro-piarahamonina mbola tsy maharaka loatra ny fifampitam-baovaon'olotsotra ao amin'ny aterineto. Soso-kevitra nivoaka tamin'izany ny hahabetsaka kokoa ny lahatsoratra sy votoaty momba ny kolontsaina sy zavakanto, ny sakafo sy ny nahandro, ny fanatanjahantena, ny biby (tontolo iainana) ankoatra ireo vaovao politika na sosialy hafa mahazatra antsika. Reharehan'ny GVO mihitsy moa ny filazany fa ry zareo no nahita sy nampita voalohany indrindra ny "Lohataona Arabo" niainga tao Tonizia.
Notanterahina ny 2-3 jolay kosa ny Fihaonambe Global Voices 2012 izay azon'ny daholobe andraisana anjara. Solontena avy amin'ny firenena 60 no nandray anjara tamin'izany. Ankoatra ny filazana ny toetry ny aterineto, ny zavamisy any amin'ny tontolo sasany (Arabo), ny fizotry ny hetsika Occupy manerantany dia maro ihany koa ny atrikasa sy Barcamp natao. Anisan'ny lohahevitra ny fananganana tambazotra Afrikana hampatanjaka sy hahafantaran'izao tontolo izao ny zavamisy aty Afrika atsimon'i Sahara, ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo mavitrika amin'ny media sosialy Kenyana ho fanabeazana ho olom-pirenena sy ny hikarohana na/sy hitodihana amin'ny vaovao tsara, na zavamisy mahafinaritra misy eto Afrika fa tsy hosaronan'ny vaovao ratsy toy ny ady sy hanoanana ary ny fahantrana fotsiny. Ao ihany koa ny fampakarana ny lanja sy ny lentan'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny tenkolojia, ohatra noraisin'ny mpitari-draharaha ny fahafantaran'ny rehetra ny olo-malazan'ny aterineto lehilahy fa tsy misy na inona na inona kosa fantatra amin'izay mety ho vehivavy manampahaizana na manana ny anjara toerany eo amin'io sehatra io. Maro tsy voatenisa ny lohahevitra nodinihana raha tsy hanonona afa-tsy ny fahalalahana haneho hevitra, ny sivana mihatra amin’ny firenena sasany, ny fomba hiarovana ny bilaogera sy ny mpanao gazety amin’ny fampitam-baovao ataony, ny fanatsarana ny fomba fanoratana lahatsoratra, ny tokony hanomezan-danja ny tenindreny ary ny sisa hafa mifandraika amin’ny tontolon’ny aterineto sy ny fampitam-baovao an’olo-tsotra.
Manana tombotsoa manokana i Madagasikara amin’ny fisian’ny teny malagasy ao anatin’ity tambazotra iraisampirenena anisan’ny goavana sy lehibe manerantany ity, satria sady manome lanja sy mampahafantatra ny fisian'ny teny Malagasy no manampy ny mpanara-baovao amin’ny aterineto hanaraka ny vaovao iraisam-pirenena amin’ny teny Malagasy.
Misaotra nahavaky hatramin'ny farany.